အမှုန့်အရက်ကိုအမေရိကန်စတိုးဝင်တိုက်ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်း - သတင်း Rule
ရုံရေနှင့်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား add. အမေရိကန်ကုမ္ပဏီက၎င်း၏အသစ်အမှုန့်အရက်ထုတ်ကုန်အမေရိကန်အားပြိုင်မှုကအတည်ပြုခဲ့ပြီးလာမည့်လအတွင်းစတိုးဆိုင်များ hit ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းပြောပါတယ်.
Palcohol တစ်ဦးကဖန်ဆင်းသည် အရီဇိုးနားပြည်နယ် ကုမ္ပဏီ Lipsmark ခေါ် Single-သောက် Pouch ခြောက်မျိုးပေါင်းအတွက်လာကြလိမ့်မည်, ကုမ္ပဏီရဲ့ website ကပြောပါတယ်.
သောက်ရမ်သို့မဟုတ်ဗော့ဒ်ကာတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ဘို့ရိုးရှင်းတဲ့ရေ၌နှိုးဆော်နိုင်, တစ်ဦးရောနှောဘို့ cola သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်သီးဖျော်ရည်ကို add တစ်ခုသို့မဟုတ်ကော့တေးဖန်တီး — တစ်ခုခုကိုတစ်နာမည်ကျော်, Mojito, မာဂရီးသို့မဟုတ် သံပုရာ Drop.
အဆိုပါကုမ္ပဏီကအရက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးအခွန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဗျူရိုဖြင့်၎င်း၏တံဆိပ်များတချို့၏လတ်တလောလွှတ်ပေးသဖြင့်အံ့အားသင့်ခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်, အရာ “တကယ်တော့တချို့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ကအတည်ပြုခဲ့သည်။”
“အရက်များအဖြစ် Palcohol ၏စဉ်းစားပါ… ပဲမှုန့်ပုံစံဖြင့်. အရက်ကိုရောင်းချနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရောင်းချခဲ့ရပါလိမ့်မည်,” ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်ထည့်သွင်း, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပြည်ပမှာနှင့်အွန်လိုင်း.
ထုတ်ကုန် snorted နိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. စားသုံးသူမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များမှတုန့်ပြန်, ကုမ္ပဏီရဲ့အဖြစ် Askers ဖော်ပြထားသော “goofballs” ထိုသို့တဦးတည်းသောက်တူညီသောအမှုန့်တစ်နှစ်ခွဲခွက်ကိုယူမယ်လို့ပြောပါတယ်.
“ထိုသို့ပြုမနေပါနဲ့! ဒါဟာထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုရန်တစ်ဦးတာဝန်ယူသို့မဟုတ်စမတ်လမ်းမက,” ကတိုက်တွန်းခဲ့သည်.
ဤဆောင်ပါး, အမှုန့်အရက်ကိုအမေရိကန်စတိုးဝင်တိုက်ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်း , ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ကားတစ်စီးဗုံးဒဏ်ရာ 53 ရှီးယိုက်ဘေရွတ်ရှိပြည်သူ့ပါတီ
ဗြိတိန်ရဲ့ဝီလျံနှင့်ကိတ် hospi မှပေါ်ထွက်လာ ...
15635	0 အရီဇိုးနားပြည်နယ်, အဖျော်ယမကာ, နာမည်ကျော်, သောက်, ဥပဒေရေးရာအရက်သောက်အသက်အရွယ်, မာဂရီး, Mojito, ယူနိုက်တက်စတိတ်
← ဗြိတိန်ရဲ့ကလေးမင်းသားဂျော့ခ်ျသြစတြေးလျတိရစ္ဆာန်ရုံသို့သွားရောက်လေ့လာ Sherpa သပိတ်ခြိမ်းခြောက်မှုကျော်ဧဝရက်တောင်ထိပ်စခန်းမှာတင်းမာမှု →